Guddiga Hawlaha Guud - Maalgelinta Hawlaha Guud
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Hawlaha Guud - Maalgelinta Hawlaha Guud
Waxqabadka dayactirka ee dhirta Okanogan ee Daaweynta Biyo-Wasakhda.
Guddiga Hawlaha Guud (Guddiga) waxaa oggolaaday sharciga gobolka (RCW 43.155). Ujeeddadeedu waa in amaah lagu siiyo gobollada, magaalooyinka, iyo degmooyin ujeeddo gaar ah leh si loo dayactiro, loo beddelo, ama loo sameeyo kaabayaal dhaqaale.
Codsadayaasha u Qalma
• Ururada Quasi-Municipal
Qabiilooyinka, degmooyinka iskuulada, iyo degmooyinka dekedda ayaan u qalmin barnaamijkan.
Nidaamyada Kaabayaasha Dhaqaalaha ee U-qalma
• Biyaha Gudaha
• Wadooyinka / Jidadka
• Qashinka adag / Dib u warshadeynta
Guji si aad u aragto muuqaal ballaadhan.
Deymaha deg degga ah
Wareegga Codsiga Si Joogto Ah U Fur
Barnaamijka Amaah Degdega ah
Barnaamijka Amaahda Dhismaha Degdegga ah wuxuu diiradda saarayaa howlaha dayactirka, beddelka, iyo / ama dib u dhiska xarun soo celin doonta adeegyada muhiimka ah. Codsiyada si joogto ah ayaa loo aqbalaa illaa inta amaahda lacageed la bixinayo. Illaa iyo hadda labadan sanadood, amaah deg-deg ah ayaa la siiyay Degmooyinka Isku-Bixinta Isku-dhafan ee # 14, Dooxada Dooxada Dooxada Dooxada, magaalada Moxee, magaalada Olympia, iyo magaalada Aberdeen.
Tilmaamaha Codsiga Amaahda Degdegga ah (PDF)
Wareegyada Codsiga Dhismaha iyo Kahor-Dhismaha Oo Xidhan
Barnaamijka Amaah-Horudhaca ah
Hawlaha Dhismaha ka hor waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn
• injineernimada Naqshadeynta
• Diyaarinta dukumiintiga iibka
• Barashada deegaanka
• Helitaanka waddada toosan
• Qorshaynta qiimaha
• Kheyraadka dhaqanka iyo taariikhiga ah
• Ogeysiinta dadweynaha
Barnaamijka Amaah Dhisme
Barnaamijka Amaahda Dhismuhu wuxuu diiradda saarayaa howlaha hagaajinaya, beddelaya, ama abuuraya xarun. Mashruuca amaahda dhismaha ayaa ka koobnaan kara wax kasta oo isku dhafan oo ah dhismaha ka hor iyo walxaha dhismaha.
Codsiga tooska ah ee Maalgelinta
Soo gudbinta elektaroonigga ah ee dhammaan codsiyada loogu talagalay Pre-Dhismaha, Dhismaha, iyo Deymaha Degdegga ah waxaa loo marayaa ZoomGrants. Nuqulada waraaqaha ah lama aqbali doono.
Ka dalbo PWB - Dhismaha Kahor / Dhismaha / Degdegga ah iyada oo loo marayo ZoomGrants. Haddii aad leedahay koontada ZoomGrants, gal oo raac tilmaamaha. Haddii aad tahay isticmaale cusub, buuxi macluumaadka loo baahan yahay ee akoonka cusub ee ZoomGrants si aad u abuurto astaan. Fadlan ha u isticmaalin "The" ereyga ugu horreeya magaca hay'adda. Marka la abuuro astaanta hay'adda, dooro Amaahda Guddiga Hawlaha Guud ee aad rabto inaad codsato, hubi badhanka "codso", oo bilow soo jeedintaada. Jawaabaha si otomaatig ah ayaa loo keydiyaa
Kahor gudbinta arjiga, fadlan daabac oo buuxi Liiska Hubinta ee Shuruudaha. Tani waxay hubin doontaa in arjiga la soo gudbiyay la dhammaystiray.
Tilmaamaha Codsiga Dhismaha, Pre-Dhismaha iyo Amaahda Degdegga ah (PDF)
Dhismaha, Dhismaha Hore, iyo Dulmarka Guud ee Codsiga Amaahda (PDF)
Tababar - Adeegsiga ZoomGrants si aad u Dalbatid Deymaha Guddida Hawlaha Guud (PDF)
ZoomGrants Codsade Muqaal (PDF)
Fiidiyow Codsade ZoomGrants
Su'aalo? Fadlan la xiriir Connie Rivera, Agaasimaha Barnaamijka iyo Xiriiriyaha Qabiilka, at Connie.Rivera@commerce.wa.gov
Guji khariidad buuxda iyo xiriirada.
Khariidada Maareeyayaasha Mashruuca
Maamulayaasha mashruucu waxay halkan u joogaan inay kaa caawiyaan sidii aad u guuleysan lahayd mashruucaaga. Raadi maareeyahaaga mashruuca adiga oo gujinaya khariidada kore.
Mashaariicda ay maalgeliso guddiga howlaha guud
Abaalmarinta Amaahda Hore ee Dhismaha 2019
Abaalmarinta Amaahda Dhismaha 2019
Abaalmarinta Amaahda 2018
Kheyraadka Barnaamijka iyo Macluumaadka Dib u Eegista Dhaqanka
Buug-gacmeedka amaahda ee Guddiga Hawlaha Guud iyo Foomamka
Siyaasadaha & Buug-gacmeedka amaahda ee 2019
Warbixinta Xaaladda Mashruuca
4-U hogaansanaanta Dib u Eegista Mushaharka
Liiska Hubinta 6-B GEO 05-05
6-C Soo-helid Baadil la'aan ah
7-B Ogeysiiska Abaalmarinta Qandaraaska iyo Ogeysiiska in la sii wado
9-Warbixin Dhameystirka Dhismaha
9-B Warbixinta Dhameystirka Degdegga ah
9-C Dhamaystirka Dhismaha Ka Hor
Dib-u-eegista Dhaqanka (GEO 05-05, Qeybta 106)
Si loo ilaaliyo dhaxalka hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Washington, Gudoomiyaha Christine Gregoire ayaa saxiixday Amarka Fulinta 05-05 (GEO 05-05). Qaatayaasha lacagaha raasumaalka dawladdu waa inay kala tashadaan Waaxda Qadiimiga & Ilaalinta Taariikhda (DAHP) iyo qabiilooyinka Hindida ee Federaalku aqoonsan yahay ee laga yaabo inay dano dhaqameed iyo / ama taariikhi ah ama welwel ka qabaan agagaarka mashruuca. Si kastaba ha noqotee, haddii mashruucu ku xiran yahay Qeybta 106 ee Xeerka Ilaalinta Taariikhda Qaranka iyada oo loo marayo kaqeybgalka federaalka (sida adeegsiga maalgelinta Federaalka ama baahida loo qabo helitaanka rukhsadaha Federaalka), markaa Amarka Fulinta ee Guddoomiyaha Gobolka (GEO) 05-05 ayaan loo baahnayn
Qaatayaashu horay ugama socon doonaan waxqabad kasta oo dhismo ama dhismo ah oo carqaladeyn doona carrada (sida, qodista ceelasha tijaabada ah, dhammaystirka shaqada juqraafiga, darajaynta, nadiifinta, iwm), ama howlaha dhismaha illaa 05-05 la dhammaystiro (iyo / ama labadaba SERP iyo 106 geeddi-socod, haddii ay khuseyso) iyo PWB ayaa soo saaray warqad u hoggaansamida ugu dambeysa. Haddii waxqabadyo dhulka kaqariira ay dhacaan kahor qaataha qaata warqadda ugu dambeysa ee u hoggaansamida, maalgelinta amaahda PWB ayaa khatar galaysa.
Xiriirka dowladda iyo dowladda waa in si habboon loogu hoggaansamo dib u eegista dhaqanka. Sidan oo kale, waa masuuliyada PWB inay la xiriirto Qabiilooyinka iyo DAHP. PWB ayaa ogeysiin doonta Qaataha marka ay lagama maarmaan tahay sahaminta ilaha dhaqamada. Waa mas'uuliyadaha Qaataha inuu shaqaalaysiiyo khabiiro taariikhi ah oo takhasus u leh cilmi baarista si uu u sameeyo sahaminta una gudbiyo qoraal qabyo ah sahanka PWB si loo helo ogolaanshaha ugu dambeeya.
GEO 05-05 Maamulka Nidaamka
Connie Rivera waa xiriiriyaha koowaad ee Guddiga Howlaha Guud ee ku saabsan geeddi-socodka GEO 05-05. Abaalmarinta qaatayaasha waxay howsha ku bilaabaan iyagoo u diraya foomka EZ1 Agaasimaha Barnaamijka PWB & Xiriiriyaha Qabiilka. Agaasimaha Barnaamijka PWB & Xiriiriyaha Qabiilku wuxuu la-tashiga la sameyn doonaa DAHP iyo Qabiilooyinka. Waxaad ku soo diri kartaa agab Connie.Rivera@commerce.wa.gov ama emayl u dir:
Nidaamka 'GEO 05-05' wuxuu ubaahanyahay qaatayaasha abaalmarinta si ay u qeexaan aagga mashruuca dhismaha saameynta ay yeelan karaan, ayna aqoonsadaan dhisme kasta ama dhismeyaal 45-sano ama ka weyn ah oo ku dhex yaal goobta mashruuca. Mashruucyada qorsheynaya inay beddelaan qaab-dhismeedka da'da 45-sano ama ka weyn, sahanka kaydinta ee khadka tooska ah waa inuu ku dhammaystiraa Qaataha. The DAHP waxay soo saari kartaa jawaabo balaaran oo ku saabsan gudbinta. Jawaabta guud waa "Wax saameyn ah kuma lahan Hanti dhaqameedka / Taariikhda". Haddii aad hesho warqad noocaas ah, waxaad dhammaystirtay qaybta DAHP ee dib u eegista.
Haddii DAHP u baahan tahay macluumaad dheeri ah (dhammaystirka foomam dheeri ah, sahamin dhaqameed, qorshe daahfurnaan ah, iwm) waa inaad u hoggaansantaa codsiga. Waa macquul inaad ubaahantahay shaqaaleeyaan xirfad yaqaan cilmiga dhulka si tan wax looga qabto. Kaliya marka DAHP ay ku waafaqdo qalabka dheeriga ah ee la bixiyay ayaa ah qaybta DAHP ee GEO 05-05 oo dhameystiran. Mashruucyada qorsheynaya inay beddelaan qaab-dhismeedka da'da 45 sano ama ka weyn, an sahanka internetka waa in la buuxiyaa.
La Tashiga Qabiilka
La-tashiga qabyaaladda waxaa bilaabay Agaasimaha Barnaamijka PWB & Xiriiriyaha Qabiilka oo warqad u diraya dadka ay saameynta ku yeelan karto qabiilooyinka Hindida ee Federaalku aqoonsan yahay. Warqaddu waxay faahfaahin ka bixinaysaa macluumaad kasta oo mashruuc ah oo sharraxaya goobta iyo baaxadda mashruuca, oo ay weheliso khariidadda aagga ay saamaynta ku yeelatay. Qabiil (yaasha) ayaa loo oggolaan doonaa ugu yaraan 30-maalmood si ay uga soo jawaabaan. Waxa laga yaabaa inaanay jirin wax jawaab ah, ama ay jiri karaan jawaabo aad u tiro badan oo ku saabsan macluumaadka la bixiyey. Sida DAHP oo kale, haddii qalab dheeri ah loo baahan yahay, waa in la siiyaa Qabiilka (yaasha) waana inay ku raacaan natiijooyinka.
Dukumiintiyada Dib-u-eegista Dhaqanka
GEO 05-05 Dulmarka guud ee Codsadeyaasha Guddiga Hawlaha Guud (PDF)
GEO 05-05 Liistada Hubinta ee Codsadeyaasha Guddiga Howlaha Guud (PDF)
Amarka Gudoomiyaha ee Fulinta 05-05 (PDF)
DAHP GEO 05-05 Dulmarka Tilmaamaha (PDF)
DAHP - GEO 05-05 Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (PDF)
DAHP - Warbixinta Kheyraadka Dhaqanka (PDF)
DAHP - WISAARD: Raadi Meel Taariikhi ah
DAHP - Hab maamuuska daah furka
DAHP - Qeybta NHPA 106
Wakaaladaha La Xiriira
Xafiiska Badhasaabka ee Arimaha Hindiya (GOIA)
Xiriirinta & Tababbarka Kheyraadka Dhaqanka ee WSDOT